'दिदी करमा, आमा रहरमा' सेक्सको लागी आफ्नै छोराको शरणमा
00Thursday, 28 February 2019 Edit this post
'दिदी करमा, आमा रहरमा सेक्सको लागी आफ्नै छोराको शरणमा' कथा नेपाली पारिवारिक यौन व्यबहारमा आधारित यौन कथा हो ।
मेरो घर नवलपरासी हो। मेरो नाम विवेक पौडेल हो र म हाल कक्षा १२ मा पढ्दै छु। मेरो नाम विवेक भए तापनि आमा र दिदीले मलाई कान्छो भनेर बोलाउनुहुन्छ। यो मेरो एउटा मनभित्र गुम्सिएर रहेको एउटा कथा जसको रहस्य मैले आजसम्म यो समाजको सामु खोल्ने हिम्मत जुटाएको थिएन तर आज म पूरा बेलीबिस्तार लगाउन चाहन्छु। तर, कृपया यो घटनालाई एक कान, मैदान गर्दै मेरो गाउँसम्म भने नपुर्याइदिनुहोला।
बुवा सहितको हाम्रो चार जनाको परिवार उहाँको स्वर्गवास पश्चात् तीन जना बन्न पुगेको छौं। दिदीको पनि दुई साल अघिनै बिहे भैसकेको थियो। अर्चना नाम थियो मेरो आमाको। उमेरले जम्मा ४० सालको थिई आमा । दिदी सन्ध्याको उमेर २१ र म १५ वर्ष भएको थिएँ। हामी आर्थिक रुपले सम्पन्न भएको हुनाले गाउँमा इज्जतका साथ बाँचिरहेका थियौं।
विहे गरेको दुई साल भैसक्दा पनि दिदीको बच्चा भएको थिएनँ। दिदीको भनाई अनुसार त्यसरी सन्तान नहुनुमा उहाँको कुनै दोष नभई भिनाजुको दोष थियो। के थियो त्यो दोष मलाई जान्न मन लाग्दथ्यो। तै पनि यसो सोंच्दा लाज सरमको कुरा भएकोले म पारिवारिक मर्यादा पालन गर्दै बसेँ। दिदीका सासुससुराले त्यसरी सन्तान नहुनुको दोष हाम्रै दिदीको थाप्लोमा थोपर्ने गर्दा रहेछन्। “यसले हाम्रो छोरोबाट कुनै जायजन्म दिइन यसलाई अब घरबाट खेद्नुपर्छ” भन्दा रहेछन् उसको परिवारकाले।
परिवारकी जेठी बाठी दिदीप्रति भएको त्यो अन्याय देख्दा हाम्रो आमालाई निकै चिन्ता पर्यो। त्यसैले शरद ऋतुको एक दिन आफ्नो छोरी ज्वाँइलाई लिएर हाम्रो आमाले आफ्नो डाक्टर साथीसित खासमा के भएको रहेछ भनि जँचाउन लैजानुभयो। एक हप्तापछि आएको रिपोर्टका कागजातहरुले सन्तान नहुनुको मूल जिम्मेवार भेनाजु भएको दसी प्रमाण दियो। तै पनि उहाँको परम्परागत परिवारले यो ध्रुव सत्यलाई स्वीकार नगरी मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भने झैँ हाम्री दिदीको कोख नै बाँझो भएको दोषारोपण गरिरहे।
समय एवं तरिकाले बित्दै थियो । एकदिन बिहानै दिदी “मलाई लोग्ने र उनका परिवारले घरबाट बाँझी र अलच्छिनी भन्दै निकाले” भन्दै डाँको छोडेर रुँदै आउनुभयो। यसरी समस्याले उघ्र रुप धारण गरेपछि आमा आफ्नो डाक्टर साथीकोमा सल्लाह लिन जानु भयो। आमाका अनुसार डाक्टर साथीले हाम्रो दिदीलाई कसैसँग यौन सम्पर्क गर्न लगाएर उहाँको घर पठाईदिएमा समस्याको समाधान हुने बताउनुभएछ। हामी असमञ्जसमा पर्यौ किनभने हाम्रो दिदी कुनै बाख्री थिईनन् जसलाई रितु लागेको बेलामा कुनै बोको खोजेर बोका लगाएर पठाउन सकियोस। सामन्ती समाजमा घरघरानाको इज्जतको पनि सवाल थियो।
दिदीको भेनाबाट सन्तान नहुने पक्का पक्की थियो र बच्चा चाहिएकै खण्डमा उहाँलाई कसैले यौन सम्पर्क गर्नैपर्ने बाध्यता आयो। त्यस्तो मान्छे चाहिएको थियो जसले दिदीलाई बोका लगाओस् र सो कुरालाई गोप्य राखोस्। यदि एक कान दुई कान मैदान भयो भने सब इज्जत भताभुङ्ग हुनसक्ने भय थियो। केही दिन हाम्रो तर्फबाट पहल भयो तर कुनै त्यस्तो विश्वासिलो मानिस फेला पर्न सकेन । डाक्टर काकीले आमालाई मेरो बारेमा सोध्नुभएछ। आमाले भर्खर जवान हुन लागेको बताउनु भएछ।
एकदिन उहाँले मलाई आफ्नो मेडिकलमा बोलाउनु भयो। मेरो उमेर र शरीरको आँकडालाई मनमनै आँकलन गरिसकेपछि नरिसाउने सर्तमा उहाँले म नै दिदीलाई गर्भ बोकाउन लायक तथा उत्तम उम्मेदवार भएको कुरा आमालाई बताउनु भएछ। यो सुनेर आमा छक्क पर्नु भयो रे । यस्तो गर्नु घोर पाप हुन्छ भनेर आमा त हठात पानी पानी हुनुभो रे । धेरैपछि दिदीको दुःखको निवारण गर्ने अरु कुनै विकल्प नपाएपछि आमा उहीँ आफ्नी सानैदेखिको साथी डाक्टर काकीसंग यस विषयमा कुरा राख्न जानुभएछ। सहपाठी भएको नाताले उहाँहरुविच धेरै कुराकानी भएछन् यौनको सम्बन्धमा।
एकदिन ख्याल ख्यालैमा आमाले कुनै लोग्ने मानिस सित यौन सम्पर्क गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि पाप र समाजको डर दुबै लाग्ने हुनाले आफुले त्यस्तो बाटो नसमाएको समेत बताउनुभएछ। यौनसँगीको अभावमा आफू तड्पनु परेको आमाको कुराहरु सुनेपछि डाक्टर काकीले भन्नुभएछ “आमा छोराबिचमा सुटुक्क दुवै जनाको मन मिलेर सुरक्षित तरिकाले गरिने यौन सम्पर्क पाप होईन।
उसले आमालाई सम्झाउँदै भन्नुभएछ - "हेर, यौन सम्बन्ध राख्दैमा पाप हुने हैन । एउटा आमा गाईलाई पनि उसकै दूध चुसेर ठूलो भएको आफ्नो बाच्छोले भविष्यमा भोग गर्छ । धर्म भनेको मानिसहरुको भलाईको लागि पालना गरिने नियमहरु हुन्। ती मानिसहरुको खुशी र सुखका लागि हुन्। जसले मानिसको खुशीलाई खोस्छन् ती धर्म हैनन्। त्यसकारण शरीरको इच्छालाई नमार। मन मिल्ने साथी पाएमा मज्जाले सुखभोग गर्दा हुन्छ।"
डाक्टर काकीको मुखार विन्दबाट झरेका यस्ता नानाथरीका तार्किक कुराहरुले मेरो आमालाई हदैसम्म प्रोत्साहित गरेछ। मेरो उमेरको हिसाब गरिसकेपछि डाक्टर काकीले आमालाई भन्नुभएछ कि 'उसले उसको दिदीलाई आमा बनाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने तथ्य पहिला तिमी नै उ सित सुतेर जाँच्नुपर्छ र तिम्रो विगतका अनुभवको आधारमा उसलाई कसरी गर्ने हो सिकाउनु पर्दछ।'
यो कुराले आमालाई अलि अप्ठेरो महशुस भएपनि भित्र भित्रै हृदयमा राहत दिएछ। आखिर घरको इज्जत घरमै रहने भयो भन्दै आमाले दिदीलाई "राम्रो औषधी उपचार गरेपछि तिम्रो बच्चा हुन्छ। अर्को महिनादेखि तिम्रो ओखतीमुलो हुने कुरा घरमा गएर भन्नु” भनि पठाउनु भयो।
आमा अती राम्रो चित्रकार हुनुहुथ्यो । प्रायः जतिबेला पनि उहाँ आफ्नो ड्रोइङ रुममा एक्लै बसेर चित्र बनाउने गर्नुहुन्थ्यो । आमाले दिदी घर गएको रात एउटा अनौठो कुरा गर्नुभयो। उहाँले मलाई ड्रोइङ रुममा बोलाउनु भयो ।
म उहाँको ड्रोइङ रुममा गएर सोधें किन आमा?
आमाले मलाई नजिक बोलाएर सोध्नुभयो,”बाबु,तिमी सानो हुँदा मसित सुतेको याद आउँछ?”
“किन नि आमा?” मैले उल्टै प्रश्न गरेँ।
“फेरि सँगै सुत्दा कस्तो हुन्छ होला कान्छु?”
“हुन्न, लाज लाग्छ मामु” मैले भनेँ।
आमाले कठोर भएर भन्नुभयो - "चुपचाप म सित सुत्ने र मसित भएको ज्ञान लिएर दिदीको उद्वार गर्ने अब। आजदेखि कान्छु र मामु सँगै सुत्ने। तिम्रो मिसले स्कूलमा नसिकाएको कुरा म आजै रातिदेखि म तिमीलाई सिकाउन थाल्छु।”
मलाई असहज महसुस हुँदा हुँदै उहाँले मलाई ड्रोइङ रुममा बोलाएर यसो भन्दै गर्दा हातमा एउटा सिसाकलम लिनुभयो र देब्रे हातको बूढी र जेठी औँला जोडेर योनी आकारको दूलो बनाई त्यो सिसाकलमलाई त्यसमा हाल्दै झिक्दै गरेको देखाउँदै भन्नुभयो, “तैँले अबदेखि मलाई ओछ्यानमा यस्तै गर्ने। मेरो सुत्ने कोठामा गएर पर्खेर बस है! मेरो कुरा बुझिस?”
मलाई अचम्म लाग्यो। म हस् मामु भन्दै सुत्ने कक्षमा गएँ। उहाँ अर्को कोठामा जानुभयो र एकछिन पछि पल्लोकोठामै कपडा फुकालेर पेटिकोट मात्र लगाएर सुत्ने कोठामा आउनुभयो। उहाँले आफ्ना स्तनका पोकाहरु खुलै राख्नु भएको थियो। त्यसले मलाई खासै असर भने गरेन। जब आमाले अनौठो व्यवहार प्रदर्शन गर्न थाल्नुभयो तब मलाई कस्तो कस्तो लाग्न थाल्यो। उहाँमा आज निकै छटपटाहत थियो। पहिला पहिला उहाँले बाहिरै बाल्टीमा पानी थापेर नुहाउने बेला भित्र कट्टु लगाएको आकार देखिन्नथ्यो। आज लाउनु भएको पातलो पारदर्शी पेटिकोटमा उहाँका चाकका अर्धभागहरु मनै मोहित गर्ने खालका थिए। बत्ती नै ननिभाएर उहाँ आफ्नो ओछ्यानमा बस्नुभयो। म उभिएको उभियै थिएँ।
आफ्ना दूध आफैले यसो हेर्दै भन्नुभयो, “हेर न कान्छु मेरो दूधका मुन्टाहरु अली सुन्निए जस्ता छन् है सायद दूध जमेर होला। यसो दूध चुस्देउन मलाई सारै दुखिरहेकोछ।” यो कुरा मलाई साँचो लाग्यो र मैले एउटा नाबालकले झैं आफ्नी आमाको दूध चुस्न थालेँ। धेरै बेर चुस्दा पनि आमाको दूध आएन। मेरो बायाँ हात आफ्नो बायाँ दूधमा राखेर जोडले समाउन भन्दै आमा ममाथि ओछ्यानमा घोप्टो पर्नुभयो। म दायाँहातले उहाँको दायाँ दूध समातेर चुस्दै थिएँ। उता देब्रे हातले देब्रे दूध मालिस गर्दै करिव दश मिनेटपछि "अलि सन्चो भयो आमा?” भनेर सोधेँ।
जवाफमा उहाँले “केहीबेर अझै यसरी नै चुस न कस्तो आराम महशुस भैराखेछ, नछोड चुस्न” भन्नुभयो। दूधै नआए नि मलाई आमाको बुबु चुस्न पाउँदा निकै रमाईलो लागिरहेको थियो। उहाँका दूधका फाँचाहरु अति नरम थिए।
नाताले आमा भनेर के गर्नु? उहाँ एक स्त्री हुनुहुन्थ्यो त म एक पुरुष थिएँ। छेउमा आईमाईको गन्ध पाएर मेरो पुरुषत्व जागिसकेको हुनाले मेरा हातहरु बिस्तारै अनियन्त्रित हुन थालिसकेका थिए। मेरा हातहरु उहाँको ढाड सुम्सुमाउँदै चाकै छाम्न पुगे। अनायासै उहाँको कामुक र विस्तारित कोमल चाकका पुठ्ठाहरु पेटिकोट बाहिरैबाट मुसार्न थाले। केहीबेर उहाँको चाक सुम्सुमाएपछि मेरा हातहरुले पछाडि पट्टिबाट उहाँको पॆटिकोटलाई घुँडाभन्दा माथिसम्म फर्काउनसकेँ।
उहाँको पेटिकोट भित्र हात छिराएर नाङ्गो चाक मुसार्न थालेँ। मेरो दौरा भित्रको लौरो ठनक्क ठन्कियो। दूध चुस्दै आमाको चाक खेलाउँदा आमा स्वाँ स्वाँ गर्न थाल्नुभयो। केही मिनेट भित्रैमा मेरा दायाँ हातका औंलाहरुले आमाको चाकमुनि रहेको कोमल मांसपिण्ड छुन पुगे जहाँ बाक्लो जंगल जस्तो रौं को आभास हुन्थ्यो। मेरो गुप्ताङ् दौराको फेद चिरेर निस्कन खोज्यो। त्यो कोमल मासु आमाको त्यही योनी थियो जसको अस्तित्वको आभास पाएर मेरो लाडो ठन्केको थियो। मलाई उहाँको पुति छुन पाउँदा करेन्ट लागेझैँ भयो। म आमाको पुतिमा मेरो धाराको टुटि जोड्न हतारमा थिएँ तर उहाँको पुति भएको भाग अझै पेटिकोटले छेकेको थियो।
केहीबेरपछि आमा जुरुक्क उठ्नु भो र पेटिकोट फरक्क फर्काएर आफ्ना दुबै काखिमा अड्काउनु भो। मैले रौँ ले ढाकिएको उहाँको पुति देखेँ। उहाँ मेरो सामुन्नेमा त्यस्तै बाह्र इन्चको फरकमा बस्नुभयो। आमाले मेरो कट्टु आफ्नो दायाँ हातले तल झारेर मेरो लाडो निकाल्नु भयो र देव्रे हातले आफ्नो पुति थोरै फार्नुभयो। मैले उहाँको पुति भित्रको गुलाबी रंगको मासुको पत्र देखेँ। त्यसको बिचमा सानो छिद्र पनि थियो। मलाई म त्यहीँ प्वालबाट निस्केर यस धर्तीमा टेक्न आएको थिएँ भनेर पत्याउन मुश्किल भयो। जे होस्, आमाले त्यो प्वालमा मेरो ठन्केको लाडो जोडेर बिस्तारै बस्नुभयो। अनि मलाई आफूतिर खिच्नुभयो।
मेरो लिंग पुरै उहाँको योनीमा घुस्यो। मेरो लिङ्ग एकदम तातो भयो। त्यो क्षण मेरो लागि आफैलाई बिर्साउने क्षण थियो। आमा मेरो लिंगलाई आफ्नो योनीमा भित्र बाहिर गराउन थाल्नुभयो। बिस्तारै उहाँको योनी साँघुरिन थाल्यो र मेरो लिंगलाई कस्न थाल्यो। मेरो शरिरमा अनौठो जोश र जाँगर पैदा भयो। दुई मिनेट नहुँदै म जोशमा आएर बर्बराउँदै आमालाई चाकमा दुई हातले समातेर धकेल्दै मच्चिन थालेँ। मेरो बडेमानको लिंगले पिच्रित… पिच्रित… वाल… वाल… फुसी गरेर विर्य निकालिहाल्यो। आमा भने अझै हल्लँदै हुनुहुन्थ्यो।
मेरो ठन्किएर मालमुँग्रे केरा जत्रो भएको लाडो छिनभरमै चरी नँग्रे केरा जत्रो भएको रहेछ । तर मलाई थाह नै पाईन। यसरी होईन बाबु तँ छिटै उत्तेजित भईस्, आमाले खुईय सुस्केरा हाल्दै भन्नुभयो। केहीबेरपछि अधुरो चिकाईको पानी पिएर आमा मेरो छेउमा सुत्नुभयो। म नि मनमा कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै भुसुक्कै निदाएछु।
मध्यरातको त्यस्तै एक बजेतिर आमाले मलाई झक्झकाएर व्युँझाउनुभयो र भन्नुभयो - "हेर, तेरो मूल मिशन भनेको पहिला मलाई चिक्नु र त्यसपछि दिदीलाई नि त्यसै गरेर कसैले थाहा नपाउने गरि दुई जिउकी बनाउनु हो। हाम्रो भलाई यसैमा छ। अब मैले सिकाए अनुसार गर" भन्दै आमाले बिस्तारै साउतीको स्वरमा मलाई सम्झाउनुभयो । म आँखा मिच्दै मुडमा आउदैँ थियो उहाँले भन्नुभयो “तेरो चिकाई त कुखुराको भालेले पोथी चिकेजस्तो भयो। मलाई मात्र नभै सबै स्त्रीहरुलाई डाँगो कुकुरले छाउरी कुकुर्नीलाई गर्दाझैं लामो समय लगाएर चिकेको मनपर्छ। शुरुमा मलाई बिस्तारै लामो सास लिएर किस गर। त्यसपछि मेरा दूधका फाँचाहरु राम्ररी मुसार। बिस्तारै मेरो शरीर चाट र मेरो पुतिमा तेरो औला घुसाएर तलमाथि गरेर खेलाई देउ अनि मेरो पुति मिठो मानेर चाटि देउ। जबसम्म आईमाईहरुले अब यसले आफ्नो लिंग मेरो पुतिमा घुसाएहुन्थ्यो भन्ने छनक दिन्नन् नि तबसम्म घुसाउने गल्ती नगर। घुसाई हाले पनि दशैंमा पिंग मच्चे जस्तो मच्चिन हुन्न।”
मैले आमाको स्तनमा हात राख्दै सोधेँ, “आईमाईहरुले अब यसले आफ्नो माल मेरो ओढारमा हालिदिए हुन्थ्यो भन्ने छनक दिएको कसरी थाहा पाउने नि?”
आमा मुस्कुराउँदै बोल्नुभयो “जब केटीहरुले केटालाई हातले धकेलेर नाईँ भन्दै आनन्दले उत्तेजित हुन्छन्, त्यतिबेला ल्वाम्मै हाल्नुपर्छ।” यी कुराहरु बताईसकेपछि आमा अली लजाउँदै भित्तातिर फर्कनुभयो। आमा बोल्न छाड्नुभयो। घुँडा खुम्चाउनु भएकोले उहाँको चाक मतिर फर्केको थियो। पेटिकोट चाकसम्म आधा पल्टिएको थियो। खै! किन हो कुन्नि मेरो पुरुषत्वमा पुनर्जागरण आउन थाल्यो। उहाँको अनुमति बिनै मैले पुठ्ठाहरु चाट्न थालेँ। उहाँले सन्चो मानेर चाट्न दिइरहनुभयो। पेटिकोट सर्काएर मैले उहाँको सुकोमल योनीमा जिब्रोले चलाएँ जुन रसाएको अवस्थामा थियो। मैले विस्तारै दुई औँलाहरु घुसाएर घोलीदिएँ अनि फेरी जिब्रोले चाट्न थालेँ।
आमालाई निकै स्वाद आउन थालेछ। उहाँ पुरै सक्रिय हुनुभयो र 'यसले बाबुलाई असजिलो भयो जस्तो छ' भन्दै उठेर पेटिकोट फुकाल्नुभयो। त्यसलाई हुर्राएर कुनातिर फालेपछि मलाई कामुक नगरले हेर्नुभयो। उहाँका स्तनहरु निकै लोभ लाग्दा भोगटेका दाना जस्ता थिए। मैले उहाँको घुँडाहरु मुसार्दै तिघ्रामा चाट्न थालेँ। अलिबेरपछि झन् झन् माथि चाट्न थालेपछि उहाँले आफ्नो बायाँ हातले मेरो टाउको समाउँदै मेरो मुखलाई आफ्नो योनीमा झोंसिदिँदै भन्नुभयो “ल, कान्छु ठाउँमै पुर्‍याइदिएँ बेस्सरी चाट। बाउभन्दा सिपालु रैछस् त।”
रंसलिलाको मुद्रमा त्यस्तै दश मिनेट उहाँको योनी चाटेपछि मलाई असहनीय यौन प्यास लाग्यो। म जुरुक्क उठेर उहाँको स्तनहरु समाएँ अनि उभिएकै अवस्थामा उहाँलाई भित्तामा अडेस लाउन लगाएर भकाभक ठाडै चिक्न थालें। उहाँ आह… आह… आह… उम्म… उम्म… उम्म्… इस्स…ऽऽऽऽ उम्म… उम्म… गर्दै कामुक आवज निकाल्दै कन्न थाल्नुभयो। करिब चालीस पचास झट्का हानेपछि उहाँको योनीको भित्री भाग दह्रो हुँदै मेरो लिंगलाई कस्न थाल्यो । शरिरमा करेन्ट लागेझै एक्कासी सारा शरिर हलचल हुँदै एक्कासी श्वास प्रस्वास बढेर हामी दुबै स्खलित भयौं। मेरो चिकाईको थकाईले उहाँ मलाई कसेर अँगालो हाल्दै म सहित ओछ्यानमा गम्लङ्ग ढल्नु भयो। मेरो गाला चाट्दै भन्नुभयो “ए, त्यो भित्ते घडि हेर त कति बज्यो? तैँले त मलाई लगातार आधारातसम्म चिकेछस् नि। हेर! म ४० लागेकी बुढिलाई त आधारातसम्म यसरी बेहाल हुने गरि चिक्छस् भने दिदीलाई किन छोड्थिस् होला र? यस्तै गरि ठोकिस् भने तेरो तरुणी दिदीको के हाल होला। जेहोस् उसलाई रातभर चिक्न नछाड्नू। मलाई भन्दा अलि बिस्तारै गर्नू नि फेरि कराउन सक्छे । छिमेकीले सुनेर बर्बाद पार्लान् है अलि होस गर्नू।”
मैले नि मौकामा चौका हान्दै भने, “बिस्तारै गर्न सिकाईदिनुस न त।” “यी यसरी हो, मोरालाई यति धेरै सिकाईदिएर नि अझ नखरो पार्छस्”, भन्दै आमाले मेरो जुरुक्क उठेको लिँग आफ्नो पुतिमा स्वात्तै छिराईदिनु भयो। “ए, हो त नि मोरी!” भन्दै मैले आमालाई जिस्काउँदै बिस्तारै चिक्न थाले। आमाले तलबाट धकेल्न थालेपछि म नि मच्चिएर जोशिएँ। “धेरै मजा लिने हो भने बिस्तारै गर…” उहाँले भन्नुभयो। मैले मेरो लिँगलाई झिकेर अलि चिसिन दिएँ। झर्न आँटेको फुसी रोक्कियो।
पाँच मिनेट लिँग बाहिर राखेको त कटबाँसको लौरो झैं साह्रो बनेछ। अनि फेरि आमालाई घोप्टो पारेर दनादन पन्ध्र मिनेट जति चिकेपछि म अचेत बनेछु। कतिबेला निदाईएछ थाहै भएन।
दुईहप्तापछि तीजको मौका पारेर दिदीलाई घर बोलायौं तिजको दर खुवाउन। आमा र म मिलेर उहाँलाई मसंग यौन सम्बन्धको लागि सम्झाउन थाल्यौं । उहाँ यस्तो अनैतिक काम गर्न तयार हुनुभएन। उहाँले यो काम गर्न भन्दा बरु मर्नु बेस भन्नुभयो। विस्तृत रुपमा उहाँलाई सबै कुरा सम्झाएपछि उहाँले मुश्किलले यो काम गर्न मान्नुभयो। आमाले यसरी सम्झाएर भन्नुभयो ”तेरो भाइ कान्छु भने तेरो भावि सुखको लागि नैतिकतालाई दाउमा राखेर जे पनि गर्छु भन्छ; तँ भने यो त जिउँदै मर्नु बराबर हो भन्छेस्। पाप-धर्म भन्दा नि ठूलो कुरा जीवन हो।” सुँक्क सुँक्क रुँदै दिदीले भन्नुभयो, “विचरा कान्छु भने दिदीको लागि जे पनि गर्न मान्छ। उसलाई के थाहा यो पाप काम हो भन्ने?”
आमाले भन्नुभयो, "अब कान्छु नभन, त्यो तँलाई आमा बनाउन सक्ने जवान भाको छ। उसले बिस्तारै गर्छ कस्तो मजा आउँछ मोरी।” धेरै बेरको कुरापछि दिदीले मनको कथित आत्मको स्वाभिमानलाई दाउमा राखेर बच्चाको लागि र ढोंगी सासू ससुराबाट बच्नको लागि मात्र भनेनी मसित एकचोटि सम्भोग गर्नको लागि तयार रहेको बताउनुभयो।
त्यो दिन त्यतिकै भयो। भोलिपल्ट डाक्टर आन्टी हाम्रो घरमा आउनुभयो। उहाँले दिदीलाई रजस्वाला भएको दुईहप्ता पछि माईत आउने सल्लाह दिनुभयो। आन्टीले नै पनि सल्लाह दिएपछि दिदीको मन अलि थमारिएछ क्यार उहाँले सहमति जनाएर घर फर्किनुभयो ।
आमाले मलाई हररात दुई गिलास दूध र काजु खान दिनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मन पर्ने गरि चिक्नु नै मेरो दिनचर्या हुन थाल्यो । कहिले काहिँ त मैले ठाडै पनि उहाँको दूध समात्न जान्थेँ र भित्तामा अडेस लगाएर दुईपल्ट चिकिसकेपछि मात्र गरुम है भनेर सोध्ने गर्दथें। उहाँले पनि कहिल्यै नाई नास्ती गर्नु हुन्थेनँ। सम्भोगको बेला आमा नभनि अर्चना भन्दा उहाँ औधी खुशि हुनुहुन्थ्यो।
त्यस्तै एक महिनापछि हाम्री दिदी औषधि गर्न भनेर माईत आउनुभयो। मलाई दिदीको जवानी देखेर हलहल भैरहेको थियो। मैले आफूले आफैलाई निकै भाग्यमानी ठानेँ किनकी यति राम्री र सेक्सी दिदीसंग यौन सम्बन्ध राख्नको लागि कर गर्ने सायद म मात्र हुँ यो संसारमा। हुन पनि दिदी असाध्यै राम्री हुनुहुन्छ। सायद उहाँसंग एक रातको लागि लाखौं पैसाको बिटो फाल्न संकोच सायद कोही मान्दैनन् होला। बिहे गरिसकेको भएपनि हरहर लाग्ने जवानी, पुक्क परेका लोभलाग्दो स्तन, गोरो र सर्लक्क मिलेको जिउडाल र अनुहार, नसालु आँखा, कसिलो जिउ डाल र हेर्दै चुसिरहुँ जस्तो लाग्ने ओंठ देख्दा म झन् झन् मदहोस् हुँदै थिएँ।
उहाँ दिउँसो नुहाउनुभयो। रातमा बडो सजिएर मेरो छेउमा आउनुभयो। असमज्यस्यताको त्यो कामुक क्षणमा म दोधारमा थिएँ के गरौं के नगरौं भनेर। एकातिर दिदीको साइनो अर्कोतिर दिदीको त्यो कामुक र रहरलाग्दो जवानी। म उहाँको सुन्दरतामा लठ्ठ हुँदै थिएँ। उहाँले रातो लेहेँगा लगाउनु भएको थियो। दिदीको हातमा एक जग तातो दूध दिएर आमाले हामीलाई मेरो कोठामा हुलिदिनुभयो र ढोकाको चुकुल लगाईदिनु भयो। मैले दिदिसँग माफि मागेँ। दिदीले पनि आफ्नो भाग्यलाई दोष दिंदै भन्नुभयो, “मलाई यसमा कुनै दु:ख छैन। आमाले जे भन्नु भाछ त्यहि गर। मलाई पछुतो र अफसोच छैन। एउटा छोरा पाउने बनाईदेऊ ताकि तिम्रो भेनाले अलच्छिनी भन्दै नपिटोस।”
दिदीले पाउजु लाउनुभएको थियो। उहाँले मलाई तातो दूध दिनुभयो। आधा पिएर आधा उहाँलाई नै दिएँ। उहाँले दूध सिनित्तै पार्नुभयो। त्यसपछि मैले नाईट बल्बको मधूरो प्रकाशमा दिदीलाई चुम्बन गरेँ। उहाँको राता रसिला ओँठको स्वाद लिँदै तिनमा लागेका दूधका थोपाहरु पनि चाटिसकेपछि उहाँलाई जुरुक्क उचालेर खाटमा लगेँ। तुलनात्मक रुपमा आमा र दिदी दुबै सुन्दरी थिए। भिन्नता एउटै थियो मैले त्यसरी उचालेर पलँगमा लाँदा आमाको मुहार उज्यालो हुन्थ्यो भने दिदीको अलिकति डर मिश्रित लाज प्रतित थियो।
मैले दिदीको चोली खोलेँ। आमाको भन्दा दिदीका दूध निकै कसिला र गोला थिए। जब मैले दिदीको दूध खेलाउँदै बेला बेलामा चुस्न थालेँ दिदीको मुटुको धड्कन तेज हुँदै गयो। दिदीको नाँगो छाती हुँदै उहाँको तल्लो पेट मैले खुब चाटें। उहाँको नाईटोमा केहीबेर जिब्रो खेलाएँ। दिदी निकै नै लामो लामो सुस्केर काढ्दै छटपटाइरहनुभएको थियो ।
बिस्तारै मैले दिदीको लेहेँगा माथि फर्काएँ। रातो कट्टु लाउनुभएको रैछ। मैले उहाँको कट्टु बाहिरबाटै उहाँको योनी छामे। निकै च्वाँक र फुकेको थियो। केही बेरपछि मैले उहाँको पेन्टी पनि खोलेर उहाँको योनीमा औँला घुसाएर खेलाउन थालेँ। त्यो त्यहिँ योनी थियो जसलाई मेरो भिनाजु लठेब्रोले छुनसम्म सकेको रहेनछ। उहाँको योनी निकै कसिलो थियो। आमाको भन्दा उहाँको योनी निकै सिलित्त परेको मखमली रँगको थियो। केहि बेर त्यसरी खेलाईदिएपछि दिदीले मलाई चरप्प समातेर आफै अंगाल्न आउनुभयो। मैले त्यही मौकामा उहाँको योनीमा मेरो बडेमानको लाडो ल्वाम्मै झोँसेर झड्का दिएँ। उहाँ “ऐइया! भन्दै बेस्सरी हल्लनु भयो र त्यहीँ बेला मेरो लिङ्ग उहाँको योनीबाट चिप्लेर बाहिर निस्कियो। पुन: छिराउने प्रयास गर्दा त मेरो लिंग छिर्दै छिरेन। कतै दिदी कुमारी नै त छैन भनेर मलाई शंका लाग्यो।
मैले फेरि दिदीको योनी मालिस गरिदिएँ र दूधका फाँचाहरुलाई मुसारी दिंँदा उहाँ खुईय गर्नुभयो। उहाँ मसँग निकै कस्सिएर टाँस्सिन लाग्नुभएपछि मैले उहाँको योनीमा थुक दलेर दुई औँला घुसाई केहिबेर भित्रबाहिर गर्न थालेपछि त्यसले पानी निकाल्न थाल्यो। मैले त्यहीँ मौका पारेर उहाँको प्वालमा आफ्नो लिंग झोँसेर जोडसंग धक्का दिएँ।
दिदी “मरे नि आमा… ऐया! कान्छु निकाल प्लिज” भन्दै चिच्याउनु भयो। मलाई कता कता दिदीप्रति दया पनि जागेर आयो । मेरो जोडको धक्काले उहाँको योनीमा मेरो आधा मात्र लिंग पसेको रहेछ। म केही बेर रोकिएँ अनि गालामा चुम्बन गर्दै उहाँको कान छाम्दै भनेँ, “मैले तपाईलाई युवतीबाट महिला बनाईदिएँ तर मेरो काम यति मात्र होईन। मैले तपाईलाई दुई चार बच्चाको आमा बनाउन बाँकि छ, अब बिस्तारै गर्छु है त?”
उहाँ पीडा र कामुकता मिश्रित भागमा बोल्नुभयो “हुन्छ कान्छु, तैंले त तेरो भिनाजूले भन्दा गर्न जानेको रैछस। तँलाई त मान्नै पर्छ। तेरो भिनाजूले त मेरो चाकको दूलोमा मात्र दुईपल्ट छिराएको थियो अनि यसो दूध छाम्थ्यो त्यति नै हो। यस्तो गर्न उसलाई आउन्न।” दिदीको कुरा सुनेर एक मनले भिनाजूलाई भाटे कार्वाही गर्न मन लाग्यो। स्वास्नी पाएर नि सम्भोग गर्न नजान्ने कस्तो लठेब्रो! म मनमनै ढुन्मुनिन थालेँ। तर, अशान्त मनलाई धेरै बेरपछि सम्झाएँ अनि आफूले आफैलाई भनेँ - 'यदि भेनाजु लठेब्रो नहुँदो हो कहाँ बाट मिल्थ्यो र दिदीको मुलायम अंग प्रत्यङ्गहरुको दर्शन।' फेरी अर्को बोको मनले धन्याबाद दिएँ लठेब्रो भेनालाई।
केही बेरपछि दिदी शान्त हुनुभयो। म बिस्तारै तलमाथि गर्न लागें। दिदीले पनि अनायासै तलबाट चाक उफार्न थाल्नुभयो। मैले कुरा बुझेँ अनि पुरै बल लाएर दिदीको योनीभित्र आफ्नो लिंगको सबै भाग छिर्ने गरि धक्का मार्न थालेँ। उहाँको योनीमा मेरो लिंग पुरा छिरेपछि दिदीले आफ्ना दुई तिघ्राले मेरो कम्मरमा कैँचिमारेर दबाउनुभयो। यसो गर्दा उहाँको योनी झन् खुल्यो। मैले उहाँको दूध चुस्दै उहाँको योनीभित्र आफ्नो लिंग ल्वाम ल्वाम लिंक घुसाउन थालेँ।
भदौको महिना, शान्त र एकान्त कोठा, ध्वनि निरोधक त्यस कोठाको चौपर्खाल भित्र पाउजुको छमछम संगै गुञ्जिरहेको कामुकताले भरिपूर्ण दिदीको आवाज अनि योनी भित्र लिंग घुस्ने क्रममा निस्किएका प्लाट प्लाट आवजसंगैका रंगिन माहोलहरु। सायद यसैलाई स्वर्ग भनिन्छ होला। मेरा हातहरुले दिदीका दुवै पोका स्तन समातेर निचोरिरहेका थिए। सारा शरीरको भार लगाएर मेरो लिंगले उहाँको कसिलो योनीमा रफ्तारमय तरिकाले झड्का मारिरहेका थिएँ। दिदी गल्न लागेको भान मलाई भरहेको थियो तैपनि म त्यसको वास्ता नगरि आफ्नै गतिमा आमालाईझैं लगातार ठेलिरहेँ। दिदी एक्क्सी शरीर कच्याक कुच्युक पर्ने गरि डल्लो पर्नुभयो अनि पूरा समर्पित भएर ठूलो ठूलो आवाज निकाल्नुभयो र आ… आ… आउ… ओ… अह्म… अह्ह… इस्स्स… अह्ह… इस्स… अह्ह… गर्दै मेरो ढाडमा नङले कोपर्नुभयो। मैले उहाँलाई 'सन्ध्या डार्लिंग' भन्दै खुब संवाद मानिमानिकन सम्भोग गरिरहेँ। अन्तमा मैले दिदीको योनीमा आमाले भन्नुभएझैँ भारि पुग्ने गरि मेरो विर्य पसाइदिएँ। त्यसरात मैले दिदीलाई करिब सातपटकसम्म सम्भोग गरेँ।
बिहानपख फेरि पनि गर्न लागेको बेलामा आमाले चिया लिएर आउनुभयो र ढोका ढकढकाउनुभयो। लेहेंगा तल सारेर दिदी शौचालयतर्फ खोच्याउँदै जानुभयो। उहाँको खाटमुनि झरेको पेन्टी उठाएर मलाई दिंदै आमाले दिदीलाई पुलुक्क हेर्नुभयो। आमाले मलाई बिस्तारै सोध्नुभयो, "कतिपटक गर्यौ बाबु? मर्ने गरि ठोक्यौ कि क्या हो, बिचरी सन्ध्या त हिँड्नै सकिराछैन त?" मैले भने, “जम्मा सात पटक हो। उहाँलाई भेनाले राम्रोसंग गरेकै रहेनछन्।” आमा मुसुक्क हाँस्नुभयो।
एकछिनपछि दिदी लजाउँदै मेरो कोठामा आउनुभयो। आमाले दिदीलाई सोध्नुभयो - "छोरी आज घर नजाने?” उहाँले ज्यान दुखेर जान नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले दिदीलाई जिस्क्याउँदै भन्नुभयो “देखिस त कान्छुको मर्दाङ्गी?” दिदी केवल मुसुक्क मुस्कुराउनुभयो।
त्यसपछि उहाँहरु मेरो केठाबाट निस्किनुभयो। रातभरिको अनिदोले मलाई झुम्म बनाउँदै थियो। कोल्टे फेरेर म निदाउन पहल गरेँ। तर, यसअघी मलाई आमा र दिदीले के कुरा गर्दै छन् होला भनेर चियो गर्न मन लाग्यो। मैले विस्तारै चोरझैँ गएर यसो उनीहरुको कुराको चाल सुन्दा दिदीले भन्दै थिई, “उसको भेनाको त उसको आधामात्र होला। उसको भेनाले त मेरो पछाडिको दुलोमा मात्र छिराउँथ्यो । यसलाई त सबभन्दा आनन्द आउने अगाडिको दूलो नै हो र यसबाट केटा केटी दुबैलाई मजा हुन्छ भन्ने राम्ररी थाहा रहेछ।” म आमा दिदी बिच मेरो इस्टिमिनाको तारिफले भरिपूर्ण यस्ता कुराहरु सुनेर तीन छक परेँ।
त्यसरात पनि आमाको सल्लाह मुताविक मैले दिदीलाई दुईपटक विस्तारै चिकेँ। भोलीपल्ट हाम्रो पूर्व योजना अनुसार दिदी भिटामिनका औषधिहरुलाई आयुर्वेदिक दबाईको बोतलमा राखेर घर जानुभयो।
दिदीले पछिल्लो भेटमा त्यो साँझको उहाँको अनुभव सुनाउनु भएको थियो। भेनाले दिदीलाई सम्भोग गर्न खोज्नुभएछ तर उही पछाडिको दूलोमा मात्र गर्ने बानी बसेकोले गुद्वद्वारामै ठेल्न लाग्नुभएछ। दिदीले उहाँको लिंग समाएर “आज त यता पट्टि गर्नुस् न भन्दै छिराईदिनु भएपछि उहाँले आफ्नो लिंक त्यही तलमा गर्नुभइछ। तर, उहाँ पाँचमिनेट पनि टोक्न सक्नुभएनछ। मैले दिदीलाई योनीमा सम्भोग गरेको करिब महिना नौ महिनापछि एउटा छोरो भएछ जुन मैले गाउँकै पियनद्वारा खबर पाएँ। यता मैले घरमा मेरो आफ्नै आमालाई हर रात मनोरञ्जनको साधन बनाएर राखेको थिएँ। उहाँ पनि मुड चलेको बेला “कस्तो चिलायो कन्याईदे न कान्छु" भन्दै आउनुहुन्थ्यो। मैले पनि उहाँको चाहनालाई सम्मान गर्दै रहर पुर्याइदिने गर्थेँ ।
यसरी नै दिनहरु बित्दै गए। दिदीको माइत धाउने र म संग रात कटाउने कृयाकलापहरु बाक्लिँदै गए। त्यसपछि लगभग एक बर्ष पछि पुन: दिदीले छोरी पाइन्। दिदीको बच्चाको अनुहार ठ्याकै म संग मिल्ने भयो दुबै जनाको तर म मामा न थिएँ शंका गर्ने बाटो थिएन। उता दिदीको घर परिवारमा पनि कलह बन्द भयो। तर, नसोंचेको कुरा एकपटक मेरो आमाको महिनावारी रोकियो। जचाउँदा गर्भ रहेको कुरा पत्ता लाग्यो। त्यसपछि विधुवा आइमाई गर्भवती भएको थाहा पाए गाउँमा बसिखप्नु हुँदैन भनेर हामी गुजरात छिर्यो। त्यसपछि मेरि आमा आजभोलि मेरि स्वास्नीको उपनाम लिएर गुजरातमै हुनुहुन्छ। म मेरो आमालाई आजभोली आमा भन्न छोडिसकेँ। आज हामी चार बर्षदेखी लोग्ने स्वास्नी भएर वसिरहेको छौँ तर हाम्रो सम्बन्धको बारेमा कसैलाई केही थाहा छैन ।
'दिदी करमा, आमा रहरमा' सेक्सको लागी आफ्नै छोराको शरणमा 2019-02-28T18:52:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: 'दिदी करमा, आमा रहरमा' सेक्सको लागी आफ्नै छोराको शरणमा